Sawirka Sawirka: Bruce Silcox
Bayaanka Kala duwanaanta, Sinnaanta, iyo Ka Qayb-galka
Fiidiyowga waxaa ka mid ah Amxaar, Carabi, Shiine Soomali ah, Shiinees ah, Jarmal, Loa, Oromo, iyo Somali. Helaan subtitles adiga oo garaacaya badhanka "CC" ee dhinaca geeska midigta ee cayaaraha fiidiyowga. Fiiri fiidiyowga leh subtitles gudaha Faransiis, Hmong, iyo Isbaanish adoo gujinaya xiriirka udhaxeeya.
Bal qiyaasee aduunka oo cunug walba uu aqoonsado xuruufta bani-aadminimadooda. Qoys kastaa wuxuu ku filan yahay inuu wax cuno, iyo meel uu ku waco guriga, iyada oo aan loo eegin midabka maqaarkooda ama lambarka sirta ah ee dhalashadooda.
Bal qiyaas intee in le'eg oo aan kor ugu qaadi karno farshaxanka iyo sayniska, haddii aan ogaanay in khaniisnimadu ay ka timaaddo dhammaanteed, waxaanan raadinay hantida qarsoon.
Bal qiyaas haddii qof kastaa ku raaxaysto fadliga dhulkii noogu jiri jirey qarniyo, waxaanan isku dari karnaa si aan u ilaalino midkeenna iyo dhulkeena kaliya.
Iyadoo la raacayo aragtidan, Machadka McKnight wuxuu ku go'doomay kala duwanaanta, sinaanta, iyo ka mid noqoshada qiimaha asaasiga ah.
Kala duwanaanshaha: Waanu qadarineynaa oo aan ka faa'iideysan karnaa kala duwanaanshaheenna, waxaanan ku dhex jirnaa oo aan ka tarjumin bulshooyinka aan u adeegno.
Sinaanta: Waxaan isku habeynaa siyaasadeena, dhaqannada, iyo khayraadka si dadka dadka jinsiyada ah, dhaqamada, iyo xaaladaha bulsho-dhaqameedba ay leeyihiin fursado dhab ah oo lagu horumarinayo.
Ka mid noqoshada: Waxaan abuurnaa deegaan kaas oo qof waliba dareemo qiime iyo ixtiraam.
Ballan-qaadkani waa mid muhiim u ah in la xoojiyo xiriirkeena, kalsoonida, iyo waxtarka, iyo xoojinta howlgalkeena si aan u horumarino mustaqbal keli ah, hal abuur leh, iyo mustaqbal balaadhan oo ay dadku iyo meeraha ku koraan. Dhaqaalaha bulshada iyo dhaqaalaha ee gobolka Minnesota ee loo yaqaan 'Mni Sota Makoce', oo ku yaala Dakota, waxay ku xiran tahay dhammaan dadka oo dhan.
Waxaan aragnaa siyaabo badan oo lagu ogaanayo aragti ahaan sida masruuf, hogaamiye, hogaamiye fikir, iyo shaqo-bixiye, waax dhaqaale, iyo maalgeliye hay'adeed.
Dhammaanteen waxaan qabannaa, waxaannu dooneynaa inaanu maanka ku hayno oo aan wax ka qabanno dhaqanka qotoda dheer, caadooyinka dhaqanka, iyo qaababka go'aan qaadashada ee ku salaysan sinaan la'aan. Takooridda jinsiga ayaa ah dhaxalka taariikhda xanuunkeena qaranka, iyo cunsuriyadda hay'adaha iyo kuwa xagjirnimada joogtada ah. Sinnaanta macneheedu waa in la helo waxa loo baahan yahay in lagu guuleysto, maadaama aynaanu dhammaantood ku dhasheen fursado isku mid ah.
Waxaan u shaqeynaa shaqadayada kala duwanaanshaha, sinaanta, iyo ku darista geesinimada iyo rajada-ogsoonaanshaha waxay u baahan tahay ballanqaad joogto ah. Marka aan qaladaad ka dhigno, waxaanu la qabsan doonaa oo sii wadaynaa inaan barto.
Shaqadani waa masuuliyadeena la wadaagayo-iyo fursaddeena la wadaago -waxaa sabab u ah waxa ka dhexjira maaha wax aan ka yareyno qaddarkeena la wadaago.
Akhri qoraallada qoraalka ah wixii macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan qoraalka McInight ee warbixinta DEI.
Halkan waa our xogta kala duwan ee shaqaalaha.
DEI Wararka, Fikradaha & Ilaha
Bayaan ku saabsan geerida Mudane George Floyd